730 jaakadaha iyo surwaalka: tuug nigis hoose ah oo lagu xiray Japan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » 730 jaakadaha iyo surwaalka: tuug nigis hoose ah oo lagu xiray Japan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • dhaqanka • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Kiiska u muuqda mid aan qarsoodi ahayn ee xatooyada nigiska ayaa dhab ahaantii aan caadi ahayn Japan.
Booliiska Japan ayaa xabsiga dhigay nin xaday jaarooyinka iyo surwaalada.
Nin ayaa ka xaday dharka hoosta dumarka dharka dhaqa.
Boolisku waxay gurigiisa ka heleen 730 xabbo oo ah nigis la xaday.
Booliiska magaalada Beppu ee koonfurta Japan ayaa xiray qof la tuhunsan yahay oo lagu eedeeyay inuu xaday 730 gogo 'oo ah nigis-hoosaad haween ah oo laga soo qaatay dhaqaal qadaadiic ah, ka dib markii gabar 21-jir ah oo dhigata kulliyadda ay sheegtay in lix kabood oo ka mid ah nigisyadeeda laga waayay goobta dharka lagu dhaqdo.
Beppu Saraakiisha booliiska ayaa baaray guriga Tetsuo Urata oo 56-jir ah waxayna warbaahinta u sheegeen “sanado badan ma aysan qabsanin surwaal aad u badan”.
Booliisku waxay qabteen 730 gabdhood oo ah nigis hoosta dumarka intii lagu guda jiray baaritaanka, taas oo daba socotay eedeymo loo jeediyay Tetsuo oo ka timid gabar 21 jir ah oo dhigata kulliyadda. Waxay u sheegtay bilayska Tetsuo inay ku maydhatay lix ka mid ah nigisyadeeda dhar -dhaqidda 24 -kii Ogosto.
Eedeysanaha ayaa la sheegay inuu qirtay inuu xaday tirada badan ee nigiska laga helay hantidiisa.
Bishii Maarso, Takahiro Kubo, oo ah 30 jir koronto yaqaan ah, ayay mas'uuliyiintu ku eedeeyeen in uu xaday 424 gogo 'oo ah nigis iyo dhar dabbaasha gabdhaha da'da yar ee degmadda Saga ee koonfur-galbeed.
Sanadkii 2019 -kii, booliisku waxay heleen in ka badan 1,100 shay oo ah nigis -hoosaad haween ah oo lagu hayo kiisaska futon ka dib markii ay weerareen guriga Toru Adachi oo ku yaal xeebta Oita ee xeebta, tuhun kale oo tuug tuug ah oo jaban oo japan ah.